पोखरा, २७ माघ । पोखरा महानगर वडा नं. १८ भकुण्डेस्थित शान्त माविको २६ औ वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । पोखरा महानगर पालिका को उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै विद्यालयमा पारदर्शी लेखाप्रणाली भएको र अन्य विद्यालयले यस विद्यालयबाट शिक्षा लिनुपर्ने बताइन् । उनले अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी कृयाशील रहेर नै विद्यालयले स्तर कायम राखेको बतइन् । विद्यालयलाई आफूले सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाइन् । पोखरा महानगर वडा नं. १८ का वडा अध्यक्ष रणबहादुर थापाले विद्यालयको आवश्यकताको आधारमा हरेका योजनालाई प्राथमिकतामा राखी रकम विनियोजित गर्ने र छिट्टै विद्यार्थीलाई यातायातको पनि व्यवस्थापन गरिने बताए । स्थानीय समाजसेवी प्रेम जिसी, रामचन्द्र शर्मा तिमिल्सिना, पुर्व अध्यक्षहरु, सूर्यबहादुर खड्का, मित्रमणि तिमिल्सिना, नेकपा…
काठमाण्डौ २८ माघ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बढुवामा असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र उप्रेतीले आइतबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । शनिबार १४ जना एसएसपीको बढुवा हुँदा छुटेपछि उप्रेतीले प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। उनको राजीनामाबारे निर्णयार्थ प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको छ। एसएसपी बढुवामा आवश्यक अंक नपुगेका कारण उनलाई समावेश गर्न नसकिएको प्रधान कार्यालय र गृहको भनाइ छ। बढुवामा अन्याय भयो, तर, केही गुनासो छैन। मैले स्वतन्त्र जीवन जिउने निर्णय गरेँ। सरकारको…